Ny finoana fisaka etỳ an-tany araka ny Soratra Masina | Apg29
Ny filazana fa ny fiangonana any Moyen-Âge nino fa fisaka ny tany dia lainga avy amin'ny evolisiona
Raha mamaky ny Baiboly ianao, dia afaka mahita mazava tsara fa boribory ny tany. Raha ny tany fa tsy boribory dia nitady hisambotra an'i Jesosy tsara diso, rehefa hoy izy fa na andro na alina teny an-tany, rehefa hitondra an-trano ny voavonjy rehetra any an-danitra.
Ny gazety Day namoaka lahatsoratra be dia be teo amin'ny lafiny enina Jonathan Sverker momba ny tsikombakomba . Ankoatra ny zavatra hafa, dia nitafatafa ahy ao amin'ny lahatsoratra.
Sverker ihany koa no nitondra ny teorian'ny teti-dratsy fa fisaka ny tany, ary fa tsy boribory. Izany foto-kevitra Izaho no nanaitra imbetsaka Apg29.
Misy Kristianina mino fisaka ny tany, ary efa samy nahazo mihitsy aza mailaka sy taratasy hemsänt ahy izay Efa niezaka aho mba hino amin'ny fisaka ny tany.
Ve anefa mino fisaka ny tany, miorina amin'ny Baiboly, dia tsy maintsy dislodge andinin, ka nanome azy ireo heviny hafa, ary mandà izay tena lazain'ny Baiboly.
I Jesosy dia miresaka momba ny manodidina eto an-tany
Raha amin'izany andro izany dia ho eny an-tampon-trano, ary manana ny fananany ao an-trano, dia aoka tsy hidina ka hitondra azy. Toy izany koa, ny olona izay any an-tsaha tsy hiverina an-trano. [...] Izaho milaza aminareo hoe: Ny alina dia ho roa lahy miray fandriana. Ny anankiray horaisina ary ny anankiray havela.
Lioka 17: 31,34
An-trano i Jesosy, rehefa mitondra ny mpino ho any an-danitra, dia misy andro aman'alina eto An-tany. Ary izany ihany no atao raha boribory ny tany. Ao amin'ny lafiny iray amin'ny tany no andro raha ny iray hafa dia misy ny alina.
Raha mino ianareo fa ny tany fisaka, dia mampihena amin'Andriamanitra. Lonaka fisaka tsy mino fa ny kintana sy ny toerana misy.
Dia mandà izy ireo fa Andriamanitra dia tena mahery sy lehibe toy izany fa afaka mamorona toerana sy ny vahindanitra. Fa ny Baiboly sy ny andriamani-dehibe dia efa namorona izany rehetra izany!
Tany am-piandohana, dia namorona ny lanitra sy ny tany.
Ny siansa disproves ny teoria
Ireo izay mino fa ny tany fisaka Laviny araka sary ny tany amin'ny toerana toy ny porofo fa boribory ny tany. Fa na dia tsy misy ny sary, misy porofo be dia be fa ny tany boribory ankapobeny ..
Fanakonam-bolana manana aloka boribory
Nandritra ny fanakonam-bolana amoahany ny aloka tany ny volana, fa ny tany no eo amin'ny masoandro sy ny volana. Izany no azo atao amin'ny fisaka ny tany.
Ankoatra izany, ny tany ny aloky ny volana mazava boribory, milaza fa ny tany manodidina. Ny hany teny izay amoahany ny boribory foana na inona na inona zoro aloka dia sehatra.
Antarctica dia kaontinanta
Lonaka fisaka midika fa tsy Tendrontany Atsimo raha tsy izany manda avo ny ranomandry. Fa ny zava-misy dia mampiseho fa Tendrontany Atsimo dia kaontinanta. Efa imbetsaka ny mpahay siansa niondrana an-tsambo manodidina Tendrontany Atsimo.
Sary maro efa naka tamin'ny kaontinanta avy amin'ny fiaramanidina. Ankoatra izany, maro fanafihana amin'ny tanibe Tendrontany Atsimo nanaporofo fa tsy manda avo ny ranomandry.
Tany mahatafintohina ny kintana
Toy izany koa kintana aza tsy hita amin'ny faritra rehetra eto an-tany. Izy io dia toe-javatra izay afaka ihany no hazavaina amin'ny alalan'ny boribory ny tany. Tany curvature dia midika fa tsy afaka mahita ny faritra sasany lanitra.
Raha ny eto an-tany dia fisaka kapila, dia hita na aiza na aiza kintana ny lanitra noheverina.
Ankehitriny dia efa nijery ny sasany ara-tsiansa hevitra izay manambara mazava tsara fa boribory ny tany. Ndao hiverina any amin'ny Baiboly, mba hahitana izay manana ny momba ilay foto-kevitra.
Voalohany dia mijery ny vanim-potoana mahaliana, mampiharihary vadian-kevitra fa ny tany boribory.
Ny fizaran-taona eto an-tany dia manaporofo ny manodidina
1 Genesisy 8:22 Raha mbola maharitra koa ny tany tsy famafazana sy ny taom-pijinjana, ary ny hatsiaka sy ny hafanana, ny fahavaratra sy ny ririnina , andro sy ny alina. "
Milaza ny Baiboly fa ny fizaran-taona tsy hifarana raha mbola maharitra koa ny tany. Ny fizaran-taona eto an-tany mampahafantatra ny manodidina.
Tany spins tsy ao amin'ny mpiray toy ny ambony. Izany ihany koa ny manodidina ny masoandro ao amin'ny faribolana lehibe antsoina hoe mihodina. Tany rehefa mihodidina ny masoandro, ary ny eto an-tany mpiray Jery mitongilana, dia midika fa manana fizaran-taona efatra. Ririnina mirona sy Soeda sy ny Ila Bolantany Avaratra ny masoandro lavitra.
Ny antony ny fanovana ny fizaran-taona ny Tany Jery mitongilana. Raha mbola eto an-tany mihetsiketsika manodidina ny masoandro, dia mihodinkodina manodidina ny azy ihany koa ny mpiray, izay mitongilana momba ny 23.5 ambaratonga. Noho ny fiakarana mampody ny avaratra sy ny atsimo cérébraux ho nanondro ny masoandro any amin'ny revolisiona tany manodidina ny masoandro. Izao no zavatra azontsika toy ny fizaran-taona.
Raha ny tany amin'ny ampahany ny mihodina rehefa miatrika amin'ny Ila Bolantany Avaratra ny masoandro, dia mahazo tanamasoandro bebe kokoa mandritra ny andro. Ny masoandro fanampiny angovo heats ny tany sy ny rivotra - dia ho lohataona sy ny fahavaratra.
Enim-bolana taty aoriana, ny tany no tao an-dafin'i ny masoandro, ary avy eo ny atsimo Ila Bolantany izay mitodika mivantana any an-masoandro, raha amin'ny Ila Bolantany Avaratra ao aloka. Noho izany, ny lohataona sy ny fahavaratra, ohatra, Aostralia sy Amerika Atsimo, raha mbola manana latsaka sy ny ririnina eo amin'ny anisan'izao tontolo izao.
Zavaboary eto an-tany dia mampiseho ny manodidina
1 Genesisy 1:14 Ary Andriamanitra nanao hoe: "Aoka ny lanitra mazava hampisaraka ny andro sy ny alina!" Ho famantarana ho marika fizaran-taona sy andro ary taona , 15 ka ho fanazavana eny amin'ny habakabaky izay mamirapiratra eto an-tany. "Ary rehefa izany.
16 Andriamanitra nanao ireo fanazavana lehibe roa, amin'ny hazavana lehibe kokoa ho mpanapaka ny andro ary ny fanazavana kely ho mpanapaka ny alina , ny kintana koa izy. 17 Ary nametraka azy teny amin'ny habakabaky mba hanazava eny ambonin'ny tany, 18 ho mpanapaka ny andro sy ny alina, ary hampisaraka ny mazava sy ny maizina. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany.
Hitantsika izany ao amin'ny andinin-teny fa Andriamanitra efa nanendry ny marika famantarana ny fizaran-taona sy andro ary taona. Ary misy ny masoandro sy ny volana. Ny fotoana samy hafa, toy ny fizaran-taona dia maneho mazava tsara fa ny renitantely, manana manodidina ny tany! Ary izany dia ny Baiboly no mampianatra antsika izany!
Raha maka ny fisaka mpino 'toy izany no tsy fandresen-dahatra ny Baiboly. Milaza izy ireo fa ny masoandro sy ny volana Mitovy. Ny volana dia ho tahaka be toy ny masoandro koa tsy marina, satria tamin'ny 1 Eksodosy 1:16 hoe:
Andriamanitra nanao ireo fanazavana lehibe roa, ny lehibe fahazavana ho mpanapaka ny andro sy ny kely fanazavana ho mpanapaka ny alina, ny kintana koa izy.
Eto dia mazava fa ny masoandro dia lehibe kokoa noho ny volana! Mba hamaliana izay mampiseho zava-misy: Vakio ny Baiboly sy mino izany!
I Isaia dia miresaka momba ny manodidina eto an-tany
Fa tsy hahafantatra ve ianao, sa tsy izany? Moa tsy izany voalaza hoe: anao hatrany am-piandohana, tsy fantatrao izany satria ny fototry ny tany? Izy no mipetraka ambonin'ny tany manodidina , ireo izay miaina eo aminy dia toy ny vitsika. Ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lamba, miainga tahaka ny lay ny miaina ao. - Isaia 40: 21-22
Ny andinin-teny momba an'Andriamanitra izany, fa tsy ara-tsiansa bokiny mitondra ny lohateny, fa ny tany dia voalaza ho boribory (tontolo, sehatra) toy ny sendrasendra fotsiny - toy ny hoe fa resaka mazava ho azy fa tsy mila hazavaina.
Tany mihantona eny amin'ny habakabaka
Ao amin'ny bokin'i Joba, dia afaka ihany koa ny mamaky ny tany mihantona eny amin'ny habakabaka - Toy izany koa ho toy ny Masoandro sy ny Volana.
Ary mamelatra ny lanitra avaratra ho eny ambonin'ny ho any amin'ny habakabaka, dia manantona ny tany amin'ny tsy misy . - Joba 26: 7
Mariho fa izany no tsy ny tany eo amin'ny andry. Tany mihantona amin'ny toerana rehetra!
Teny an-dranomasina, ianao dia afaka mahita ny faravodilanitra dia curved, toy voasoratra eo amin'ny bokin'i Joba, izay iray amin'ireo Baiboly tranainy indrindra boky:
An arched faravodilanitra , dia nipetraka nanerana ny rano, izay mazava manamorona ny maizina. - Job 26:10
Ny tany manodidina no antoka amin'ny fotoana rehetra. , Ohatra, dia efa azo atao ny mahita izany amin'ny fanakonam-bolana (ny aloka Tany mamoaka ny volana), fa koa amin'ny solförmörkrlse.
Rehefa Jesosy dia niantona nofantsihina teo amin'ny fanatanterahana ny famonoana ho faty ny hazo fijalian'i Kalvary lasa lehibe tako-masoandro. Tamin'ny alalan'ny hazo fijalian'i Jesosy no manaporofo ny tany manodidina.
Marka 15:33 ny fahenina ora [12.00] tonga ny tany rehetra haizina izay naharitra hatramin'ny ora fahasivy [15.00].
I Jesosy, rehefa nihantona teo amin'ny hazo fijaliana nandrakotra ny tany rehetra 'ny haizina ho adiny telo. Izany naminany Amosa on. Vakio ny mampino faminaniana:
Amosa 8: 9-10 izao no ho tonga amin'izany andro izany, hoy ny Tompo Andriamanitra, izay hampandrenesako ny masoandro mba hidina amin'ny mitataovovonana ka hametraka ny firenena ao amin'ny maizina amin'ny antoandrobenanahary . 10 Hampodiko ho fitomaniana ny andro firavoravoanareo, ary ho hira rehetra nisaona. Ao dia hampitafiko ny andilany rehetra lamba fisaonana ka hanao sola loha rehetra. Dia aoka ho toy ny fisaonana zanakalahy tokana ho an'ny sy ny faran'ny ny andro mangidy.
Na ny mpahay tantara romanina Flegona Miresaka momba ny tako-masoandro lehibe tamin 'ny fotoana Jesosy hazo fijaliana. Origène avy any Aleksandria (182-254 AD) in Manohitra ny Celsus (. Boky II, Toko XIV) nanoratra fa Flegona, ao amin'ny "Tantara", Miresaka momba an'i Jesosy:
"Ary Flegona, ao amin'ny fahatelo ambin'ny folo na fahefatra ambin'ny folo boky, araka ny eritreritro, ny tantara, tsy hanoratra, Jesosy, ny fahalalana ny ho avy fisehoan-javatra (Jereo koa ny latsaka any an fisafotofotoana momba ny zavatra sasany izay miresaka Petera, toy ny hoe izy ireo miresaka momba an'i Jesosy), nefa koa dia nijoro ho vavolombelona fa ny vokatra mifanitsy amin'i ny faminaniana. "
Nolazainy fa manana tetika famaritana ny fanakona-masoandro Flegona iray miaraka amin'ny horohoron-tany nandritra ny fotoana nanjakan'i Tiberio (angamba ny 29 taorian'i JK): fa "lehibe tako-masoandro", ary:
"Lasa alina amin'ny ora fahenina ny andro [izany hoe 12.00] ka dia niseho koa ny kintana eny amin'ny lanitra. Nisy horohoron-tany lehibe any Bitynia, ary nanjera zavatra maro tao Nicée. ".
Mitranga ny tako-masoandro ny volana, rehefa mandalo eo anelanelan'ny tany sy ny masoandro, ary ireto no ho eto mahitsy tsipika, ny masoandro tanteraka na amin'ny ampahany avy amin'ny mpijery nanamaizina eto an-tany.
Mbola ny boky voasoratra milaza fa nino ny olona tamin'ny Moyen Âge fa fisaka ny tany.
Efa mora dia nanaporofo fa, fara fahakeliny, nianarany nandritra ny Moyen Âge nahalala fa boribory ny tany.
Ny mpampianatra tantara Zavatra Dick Harrison hoe:
Ny marina dia tsy misy olona mistrusted Columbus ary saika tsy misy olona fahiny nihevitra fisaka ny tany. Nisy hatramin'ny fahiny lalina sy mino miely patrana manerana ny niforona Eoropa, izay fa boribory ny tany. Saika rehetra Eoropa Andrefana mpanoratra amin'ny ankapobeny lohahevitra ara-jeografika ao amin'ny lisitra fizahany [ny sasany amin'izy ireo lisitra] rehetra amin'ny fifanarahana fa boribory ny tany.
Mino ny ankamaroan'ny mpahay tantara maoderina fa angano fotsiny fa ny fahalalana ny tany dia nanadino ny endriky nandritra ny Moyen Âge ary fa Izy no ohatra ny factoid.
Ny factoid dia finoana izay natao ho marina, fa izay raha ny marina dia diso.
Nitory ny manodidina ny tany
Ny toriteny any Moyen-Âge dia natao mifanohitra amin'ny zavatra maro no tsy mino amin'ny teny latinina fa amin'ny fitenin'ny. Ary ao amin'ny toriteny dia notsaboina famoronana rafitra, anisan'izany ny Tany boribory endrika.
Ny norvejiana Konungaspegeln avy amin'ny 1200s eny ifotony dia ny boky izay manonona ny endriny ny tany sy ny fampianarana manazava ny mpamaky mba hieritreritra ny tany ho toy ny paoma mihantona malalaka. Koa raha ianareo ho fahazavany eo ny paoma, araka ny hazavaina ny andro sy ny alina, ary ny toetr'andro fahasamihafana eo amin'ny Nordic firenena sy ny tany manodidina ny ekoatera.
Petrus de Dacia, matetika antsoina ho voalohany Soeda mpanoratra, dia Dominikana moanina avy Gotland. Tao amin'ny asa soratra ireo ny tany baolina endrika mazava.
Lainga avy amin'ny evolisiona
Nandritra ny tapaky ny volana sy ny tara 1800s fihenana ara-tsiansa sy ny ady eo Darwinists teolojianina momba ny fampianarana momba ny evolisiona. Ny angano ny tany fisaka lasa ny tohan-kevitra mafy ny fiangonana, ary nampiasaina mba hampisehoana fa ny Fiangonana dia diso ihany koa momba ity olana ity.
Ny lainga dia niparitaka, ary nanomboka ho raisina ho toy ny fahamarinana.
Diso Fandray ny Hevitrao andinin-
Matio 4: 8 Ary ny devoly nitondra Azy Indray nankany an-tendrombohitra avo dia avo ka naneho Azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mbamin'ny voninahiny. 9 Ary hoy izy: "Izao rehetra izao dia homeko Anao, raha mety Hianao hiankohoka eto anatrehako ahy."
Mazava, takatsika fa ny devoly dia tsy ara-bakiteny mety hisambotra an'i Jesosy niakatra teo an-tendrombohitra avo mba hahita ny fanjakana rehetra, satria toy izany tendrombohitra avo dia. Mila mahatakatra ny andinin-teny ara-panahy. Ary ny devoly nitondra fakam-panahy isan-karazany Jesosy saina.
Raha ny Baiboly milaza fa ny tany tsy maintsy zorony, ohatra, ao amin'ny Joba 38:13, dia sary. Hitantsika mazava tsara izany raha mamaky ny andininy ao amin'ny teny manodidina fa tsy manao fotsiny notsongaina mitokana. Fitsipika laharana voalohany dia ny hamaky mandrakariva zava-teny manodidina.
Joba 38: 9-18Iza no nanisy varavarana misakana ny ranomasina, raha nibosesika nivoaka avy tany am-bohoka, 9 rehefa nanome ny rahona ny akanjo ao ary aoka ny aizim-pito ho ny fahazazany, 10 rehefa nanapa-kevitra aho avy eo, ary nanisy hidy sy varavarana ho azy, 11 ka nanao hoe: " eto ianao dia ho avy ka tsy hihoatra, izany dia tokony ho faly ho nijanona onja '? 12 Efa hatramin'ny nanomboka ny andro, nandidy ny andro ho maraina mangiran-dratsy, ary voatondro toerana 13 izay mety hanova ny tany amin'ny zorony, ka ny ratsy fanahy hakopakopany hiala izany? 14 Dia hanova ny tany ny endrika ny tombo-kase tanimanga eo ambany, ary miha mipoitra toy ny akanjo vaovao. 15 Ary raha ny fahazavan'ny ratsy fanahy, sy ny sandrin'ny dia miavonavona hamaky. 16 Efa nidina ho any amin'ny ranomasina ny loharanon-karena, ary nandeha ny lalina ambany? 17 Moa ny vavahadin'ny fahafatesana efa naharihary taminao, ianao efa nahita ny aloky ny fahafatesana seranana? 18 Efa afaka mahita an-dafin'ny expanses eto an-tany? Ampahafantaro ahy
Andininy iray hafa ihany koa izay mazàna Nanazava Diso hevitra ilay vehivavy fa fisaka ny tany, ary manana zorony efatra ireo ny Apokalypsy 7: 1
Apok 7: 1 Rehefa afaka izany, dia nahita anjely efatra nitsangana teo amin'ny zorony efatra, nihazona ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka eto an-tany dia, na ny ranomasina, na tamin'ny hazo akory aza.
Fa izao fotsiny no famaritana ny tany ny lafiny efatra. Avaratra, Atsimo, Atsinanana sy Andrefana. Nahoana no mamaky na inona na inona izay tsy ao amin'ny lahatsoratra? Izao no voalaza na inona na inona, ohatra, fa ny tany ho fisaka izany.
Ankoatra izany, dia tsy tokony hohadinointsika mihitsy Apok 7: 1 dia mamaritra ny fahitana - fahitana - izay midika hoe tsy maintsy mitovy ara-bakiteny satria manana isa ary te ohatra - miharihary ny fahamarinana.
Impiry isika no tsy mba lazaiko fa "ny masoandro miposaka" rehefa fantatsika fa ny masoandro dia tsy afaka "mandeha" satria tsy misy tongony! Na SMHI Miresaka momba ny "Sunrise sy ny masoandro mody" na dia teo aza ny sasany tokony hahalala fa ny tany izay manodidina ny masoandro!
Ny lafiny anglisy AnswersInGenesis manazava ny Soratra Masina isan-karazany lehibe izay matetika takatry fa ny tany ho fisaka.
Eto aho dia tsy maintsy ihany koa ny miresaka momba ny nofin'i Nebokadnezara Mpanjaka fahitana ao amin'ny Daniela toko faha-efatra:
Dan 4: 7-8 Izany no fahitana izay efa teo am-pandriako: Nahita tamin'ny fahitako ny mpiambina masina anankiray nidina avy tany, ary tena mafy. 8 Ary ny hazo sady lehibe no mahery, sy ny sisa avo fa nitehika tamin'ny lanitra, ary niseho ny faran'ny tany.
Izany dia ahitana ihany koa matetika ho toy ny fandresen-dahatra fa ny Baiboly dia miresaka momba ny eto an-tany, satria fisaka ny hazo "niseho faran'ny tany". Kanefa ity dia indray ny fahitana - koa nofy - ary tsy manazava nofy foana ny fomba mijery ny marina. Ary faharoa, dia ny sary izay koa ny Daniela dia nanana mpandika teny, araka ny hitantsika ato amin'ity toko ity tatỳ aoriana! Fitsipika laharana voalohany: namaky foana ny zava-drehetra eo amin'ny teny manodidina!
Ve ny tany eo amin'ny andry?
Alohan'ny handeha lavitra kokoa ho amin'ity lohahevitra mahaliana, tsy maintsy hilaza na inona na inona momba ny izao tontolo izao na dia hijoro eo an andry, izay hitanao eo amin'ny sary eo ambony. Moa izany tokoa ve ny Baiboly?
Joba 38: 4-7 Taiza ary ianao, fony aho nametraka ny fototry ny tany? Valio, raha manana izany fahalalana. 5 Iza no nanapa-kevitra ny dimensions, fantatrao! Ary iza no nanenjana ny famolaina teo aminy? 6 Aiza no ny iankinan'ny ny fiarovany mafy? Iza no nametraka ny vato fehizorony, 7 raha ny kintan'ny maraina niara-nihira sy avokoa ireo zanak'Andriamanitra nihoby?
Ary koa, ity sary. Tsy miresaka momba ny "ny kintan'ny maraina niara-nihira," Iza no efa nahita ny kintana mihira? Misy resaka "famolaina", ary "ny vato fehizoro". Ary izao no sary izay miresaka momba ny Andriamanitra lehibe sy masi-mandidy ny heriny mba hamoronana. Noho izany: Job tsy milaza ny tany dia hijoro eo an andry sary tao an-tampon'ny maneho lahatsoratra ity.
Inona no an-danitra ny kintana?
Up. 6:13 kintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany, toy ny aviavy latsaka ny aviavy manta rehefa hozongozonin'ny.
Fantatsika fa ny kintana ny masoandro. Raha ny kintana latsaka eto an-tany, ny tany dia ho potika avy hatrany. Amin'ny teny hafa, dia tsy afaka ny ho ny kintana isika mihevitra azy ireo ho toy ny Baiboly. Ahoana ary no izy?
Hitantsika ao amin'ny Baiboly fa i Satana, rehefa noroahina avy tany an-danitra, dia naka ny ampahatelon'ny kintana eny amin'ny lanitra taminy tamin'ny fianjerany. Stars amin'ny vanim-potoana ity dia ny anjely. I Satana dia nanana niaraka taminy ny ampahatelon'ny anjely any an-danitra ny raharaha.
Raha ny fotoana dia ny kintana eny amin'ny lanitra lavo tamin 'ny tany ho toy ny teo ny anjelin'ny lanitra izay niankohoka teto an-tany.
Izany dia mampianatra antsika fa tokony hahatakatra andinin-teny sasany dia tsy maintsy aoka ny lahatsoratra manazava ny andinin-teny izy ka namaky teny manodidina. Raha tsy izany dia mahazo fahadisoana izany ihany koa ny mpino efa nanao fisaka, rehefa natao pirinty izy ireo andinin-teny sy ny tsipiriany avy amin'ny teny manodidina.
Milaza ny Baiboly fa fisaka ny tany? | EternalAnswers
Rehefa fisaka ny tany
Fisaka ny tany;
Andinin-teny ara-baiboly izay manao hoe ny tany manodidina